Shiinaha Ragga tayada sare leh 100%suuf faransiis terry caadadii logo pullover tie dheeh crewneck sweatshirt Warshadaha iyo Warshadda | Caqli badan
Tayada sare ee ragga 100%suufka terry faransiiska caadadii calan -qubka pullover tie dheeha crewneck sweatshirt
Qoorta Crew Tie Dyed sweatshirt oo lagu daray cabbir iyo maro suuf ah, waxay kuu keentaa si gaar ah oo gaar ah noloshaada maalinlaha ah ee autum. Waxaad ku xiran kartaa meel kasta oo aad rabto maalin iyo habeenba. Midabku wuxuu noqon karaa madow 、 caddaan 、 casaan 、 buluug ama isku dar saddex ama afar midab. Waa xulashada ugu fiican ee la jaanqaadi karta jaakadaha hoose ama jaakadaha jiilaalka qaabka moodada. Cabbir dheeri ah oo ku habboon ragga, haweenka iyo carruurta ee xirashada firaaqada caadiga ah, xirashada qoyska, dharka waddada. Badeecadaha waaweyni waxay dhaafi doonaan 12 tallaabo oo laga soo bilaabo duntii suuf-polyester-ka ahayd ilaa dharka oo ay ku jiraan dhowr tallaabo oo kormeer tayo leh si loo gaaro gacmaha macaamiisha. Muunad diyaar u ah jeeggaaga.
GABDHO XABADKA HOOYO
100%suufka, dhogorta gudaha, 280gsm
Cabbirka sida caadiga ah S ilaa 2XL, sidoo kale aqbal 5XL-7XL
Daboolka lakabka ah
Qoorta cajaladda Jersey
Astaanta daabacaadda waa la heli karaa
Handfeel maro jilicsan oo lagu daray xajmiga moodada ragga iyo qaabka dumarka
Xir farsamada midabeysan si cabbirka weyni u noqdo mid kala duwan
3000pcs/style amarka bulk
1, Immisa midab ayaa la heli karaa？
Waxaan isku waafajinnaa midabada Nidaamka Isku -habboonaanta Pantone. Markaa waad noo soo sheegi kartaa lambarka midabka pantone ee naqshadeynta dalabka. Waxaan la jaanqaadi doonnaa midabada marka aan muunadda ku sameyneyno wejiga la dhaqay ee iskaashatada muddada-dheer, markaa waxaad ku arki kartaa naqshaddaada muunad dhab ah. Laakiin qiimaha dhididka ayaa kala duwanaan doona waxayna kuxirantahay nooca naqshada iyo inta midab ee naqshadeynta. Waxaan sidoo kale kugula talin karnaa naqshadeynta midabka tixraacaaga.
2 、 Shahaado noocee ah ayaad haysaa?
Waxaan nahay soo -saare, waxaan leenahay hubinta warshadda BSCI.
3 、 Sideen u xakameynaa tayada badeecooyinka jumlada ah?
Waxaan bixin doonaa muunadda habboon, muunad-soo-saarka hore, muunadda dhoofinta inta dacwaddu socoto. Waxaan leenahay 4 shaqaale QC ah oo kormeera badeecadaha la dhammeeyay iyo kuwa dhammaaday inta ay soo saarayaan. Waxaan sidoo kale siin karnaa dhinac saddexaad si aan u bixinno warbixinta kormeerka kama dambaysta ah haddii amarku yahay qaddar badan.
4 、 Waa maxay muddada lacag -bixintaadu?
Siyaasaddayada lacag -bixinta waa 30% TT oo ah lacag -bixin heer sare ah iyo 70% TT ka hor inta aan laga dhoofin warshaddeena. Waxaan sidoo kale aqbalnaa L/C marka la arko qaddar badan.
Waxaan bixinnaa adeegga dacwad -qaadista muunad ka hor intaanan dalban amar ballaaran
200,000pcs bishiiba awoodda
Iibinta ku hadasha Ingiriisiga iyo adeegga iibinta kadib waxay ka dhigtaa isgaarsiinta mid dhaqso badan.
Habka xiriirka oo ay ku jiraan iimaylka, whatsapp, skype, taleefan, kulanka zoom, iwm.
Jadwalka wax -soo -saarka badan 、 sawirrada 、 fiidiyaha xitaa qulqulka tooska ah ayaa la bixin doonaa inta lagu jiro amarrada socda, si aad si fiican uga ogaato xaaladda wax -soo -saarka.
Hore: Tie Dye Sweatshirts Top Fashion Haweenka Cotton Hip Hop Sweatshirts
Xiga: ragga caadooyinka jumlada dheer gacmaha kangaroo jeebka hoodie midabo kala duwan
Fashion Poler dhogorta Streetwear Ragga dabacsan P ...
Logo caadadii warshad Shiinaha 100% bl dhogor suuf ...
Ragga Custom Cotton French Terry Oversized Splic ...
Tie Dye sweatshirts Top Fashion Haweenka Cotton Hi ...
Custom sameeyey Logo Ragga Hoodies Hoodies Cotto Tayada Sare ...